ahoana no mahazo poti amin'ny pop slots
ahoana no mahazo poti-poker tavanao
Izany dia paosy dimy fifaninanana manohitra ny ace-mpanjaka ny Heimiller sy roa mpivady eo amin'ny flop nanolotra ny ace-mpanjaka ny fandresena mba handefa Goindoo avy amin'ny fahatelo ho an'ny $233,360.
[img natolotry ny PokerTelegraph]Dia naka 45-tanana alohan'ny farany ny latabatra nikiakiaka any amin'ny fiainana ary rehefa nataony izany dia ny toerana tena ny rehetra Phil Laak izay no mahatonga ny ankamaroan'ny feo. Jordana Cristos fanokafana ny cutoff ary avy eo miantso eny kely jamba manisy tahamaina avy Laak ahoana no mahazo poti amin'ny huuuge casino. Izany dia paosy mpanjakavavy ho an'ny tanora sy ny [Ho] [8c] ho an'ny Laak; ny mpanjakavavy teo amin'ny kosa nanolotra Cristos napetraka sy Laak efa mba hanorim-ponenana ho an'ny hafa akaikin'ny malahelo sy ny $109,385 amin'ny fiovana – Cristos dia ny vaovao chip mpitarika. Ny beau, Jennifer Tilly, mampahery ny tokotanin-tsambo avy any amin'ny vahoaka, fa efa nanao ny asa rehefa nihazakazaka nivoaka ny tanana Laak mahitsy ahoana no mahazo poti amin'ny pop slots. Alexandru Masek dia handao ny farany ny latabatra ao an-toerana fahefatra taorian 'ny [Jh] [9h] nianjera teo ambonin' [Ad] [2h] ny Goindoo; ny ace amin'ny kosa be loatra ho an'ny Masek ny bera, ary izy dia nandao amin'ny maso ho an'ny $156,790 ahoana no mahazo poti-poker tavanao.
Valo ny flop manome ny za-draharaha ny tanana, ary izy dia tsara indray any an-matevina ny asa na dia eo aza manomboka ny andro fohy indrindra niisa. Cristos maka $613,355, ny seza ao amin'ny WPT tompon-daka Amin'ny Bellagio ary lasa mpikambana ao amin'ny notsiriritiny fatratra WPT Tompon-daka Club lady luck slots harato sarobidy. Cristos dia mihazona [Ah] [9h] ary ny sivy eo amin'ny flop nanome Cristos ny mpivady, ary izany dia ampy tsara ny manisy tahamaina Heimiller nivoaka ny varavarana izay nandeha izy $356,115 ny manankarena lady luck online casino pa. Ny WSOP fehin-tànana ny mpandresy mahazo azy ao amin'ny [Ac] [8s], ary Goindoo miantso ny [Ho] [4d] lady luck hq slot mandresy.